China HGM yakateedzana yakamisikidzwa vibration marasha feeder Kugadzira uye Fekitori | Chengxin Vibration Midziyo
Mutumbi mukuru weiyo yakagadziriswa vibration yemarasha feeder yakavharwa uye yakabatana neyekuzarura kwekuvhura kwesiro. Iyo arch mhando kana modhi yekudonhedza ndiro mumushini iri yakanangana zvakananga nezvinhu zviri mudenderedzwa bhini.
Mutumbi mukuru weiyo yakagadziriswa vibration yemarasha feeder yakavharwa uye yakabatana neyekuzarura kwekuvhura kwesiro. Iyo arch mhando kana modhi yekudonhedza ndiro mumushini iri yakanangana zvakananga nezvinhu zviri mudenderedzwa bhini. Kudengenyeka kweplate yekubuda kunoendeswa nenzira kwayo kuzvinhu zvakachengetwa musilo. Simba rekudengenyeka rinogadzirwa nesimba rekudengenyeka rinoita kuti zvinhu zvisununguke uye zvidonhe. Izvo zvinhu zvinopfuudzwa kune yakaderera marasha nzira yekubuda kuburikidza nemakona emadziro pane ese mativi eanodyisa marasha. Kudengenyeka kwecoiler feeder uye iyo curve groove yakanyatsogadzirirwa uye yakaverengerwa inogadzira zvinhu nerubatsiro rweiyo curve inokanda buoyancy kuve nechokwadi yekukurumidza uye yemahara marasha kuburitsa kwechinhu, kunyangwe kumarasha ane yakakwira viscosity uye hombe hunyoro zvemukati. Kune mhando mbiri dzemuchina dhizaini: imwe ndeye yakatwasuka kubuditsa hydraulic inofambiswa yemahara kurovera, uye imwe ndiyo otomatiki yekukiya mhando. Iyo yekutanga inogona kushandiswa mukushanda kweye super mwando kubatanidza zvinhu uye hombe yekudyisa huwandu. Iyo otomatiki yekukiya mhando ine yakasarudzika sarudzo dhizaini yeiyo yakakomberedza nzvimbo rediyasi uye zvinhu zvidimbu size: 200-1000MM curvature radius, uye padiki daro pakati peakakomberedza pamusoro hopper uye diversion arch ndiro iri 150-80 Kana mota ichimisa kudedera, izvo zvinhu zviri mubhini inokiya otomatiki uye kumira kutsvedza, uye hapana chikonzero chekumisikidza gedhi.
Kutyisa kunotyisa kunoshamisa musimboti. Muchina uyu unoumbwa nemotokari inodedera, muchimwiro, fanera uye zvichingodaro. Inotora miviri yakapetwa padyo nesonance musimboti, inoshandisa rabha chitubu kusheura simba, inoshanda mushe, inopa yunifomu simba uye hapana ruzha, uye kunakidza vibration simba kutyaira main groove muviri kuti uwane inodiwa mitsara amplitude. Yakashongedzerwa ne frequency converter uye hydraulic inogadziriswa ndiro, iyo marasha inoburitswa inogona kudzikiswa kubva padiki kusvika pa120% yezvakabuda, kuti uzive isina nhanho kumhanya mutemo wekudyisa.
Hunhu hukuru hwemuchina uyu ndewekuti unogona kufudza zvakananga kana pasina vibration ine simba, uye kugona kubata kunogona kuwedzerwa neanopfuura makumi maviri muzana kana ichizunguzika. Zvakare, kana chiteshi chekuburitsa chikaiswa pakati pebhanhire, bhanhire harisi nyore kutsauka, hapana guruva, hapana kupararira uye kukanganisa kuramba. Iyo yemarara bunker haisi nyore kuvhara uye arch. Iyo yakachengeteka, inochengetedza simba, inoshanda, iine marasha makuru, kusvibiswa kwakadzika uye hupenyu hurefu hwebasa. Iyo yakagadzirirwa chipfapfaidzo uye kupera simba kwemvura. Kana hunyoro hwehunhu hwakakura, mvura iri muchinhu ichi inogona kuburitswa. Kana zvinhu zvacho zvaoma, chipenga chekupfapfaidza chinogona kushandiswa kumwaya zvinhu zvakanyorova, zvine guruva rakanaka uye nemhedzisiro yeguruva.
Coal feed chiyero t / h
Pashure: Electromagnetic vibration feeder
Zvadaro: K akateedzana achidzosera marasha feeder
Chain Belt Coal Anopa
Coal Vibrating feeder Yekuchera
Impeller Marasha Anopa
K Type Marasha Anopa
Kudzorera Marasha Anopa
Kuyera Coal feeder